Akkaataa Moodii dhangii guutu fayyadamuu
Sajoo akkaakuu haalataa isa fayyadamuudhaaf barbaaddu cuqaasi.
Galmee keessatti bakka akkaataa hojii irra oolchuu barbaaddutti qaree hantuutee hiiqsiiti cuqaasi. Akkaataa wanta tokkoo olitti hojii irra oolchuuf, wantoota filachuuf harkisiiti sana booda gad dhiisi.
Yeroo xumuramu Esc dhiibi.
Title is: Akkaataa Moodii dhangii guutu fayyadamuu